Global Voices teny Malagasy » India : Zava-misy Sy Isa Mahaliana Momba ny Fifidianana · Global Voices teny Malagasy » Print
India : Zava-misy Sy Isa Mahaliana Momba ny Fifidianana
Voadika ny 16 Aogositra 2018 13:07 GMT 1	 · Mpanoratra Kamla Bhatt Nandika (fr) i Abdoulaye Bah, Vero
Sokajy: India, Fifidianana, Fitantanam-pitondrana, Mediam-bahoaka, Politika, Teknolojia
Ny 16 Aprily 2009 no hanombohan'ny dingana voalohan'ny fifidianana indianina ary hifarana ny 13 May 2009. Andiany faha-15 izao no nisian'ny fifidianana ho solombavambahoaka tao India taorian'ny nahazoany fahaleovantena tamin'ny 1947.
Milina mihoatra ny iray tapitrisa mba hifidianana
Olona miisa 714 tapitrisa no manan-jo hifidy. Eo amin'ny milina elektronika miisa 1 368 430 hifidianana  [amin'ny anglisy tahaka ireo bilaogy rehetra hafa tanisaina] no napetraka.
Famaritana ireo faripifidianana
Voalohany izao no nofaritana ireo faritany sasany mba ho faripifidianana vaovao, mba hahafahana miantoka fandraisana anjara bebe kokoa an'ireo tanàndehibe. Ny fanjakan'i Karnataka, indrindra indrindra fa Bangalore, no ohatra iray. Noho ilay famaritana  vaovao, hita ny fitomboan'ny isan'ny seza nomena an'ireo tanàndehibe manoloana an'ireo tanàna ambanivohitra.
40 millions d'électeurs supplémentaires……………………………….Mpifidy 40 tapitrisa fanampiny
Miisa mihoatra ny iray lavitrisa ny mponina indianina izay 60 isan-jato no latsaky ny 35 taona. Tetika tsara avy amin'ny haino aman-jery izay te-hanentana an'ireo tanora mpifidy, izay manome ny ampahan-taona be indrindra amin'ny mpifidy ao India. Voalohany angamba izao, no nivoahan'ireo mpilalao sarimihetsika sy mpandrindra an-tsehatra avy amin'ny indostrian'ny sarimihetsika, indrindra fa Bollywood, nila avy any amin'ireo tranony tonga lafatra mba handray anjara anaty fampielezankevitra na ao amin'ny fanentanana ny mpifidy. Araka ny fanadihadiana iray, misy mpifidy 40 tapitrisa fanampiny ho an'ireto fifidianana ireto raha oharina amin'ny teo aloha, izay natao tamin'ny 2004.
Fivelaran'ireo loharanom-baovao maro ety anaty aterineto
Ny habetsakin'ny vaovao avy amin'ny loharano samy hafa azon'ireo mpifidy raisina ary amin'ny fiteny isan-karazany no tena miavaka amin'ireto fifidianana ireto. Ohatra, niditra an-tsehatra ary namorona tranonkala manokana ho an'ny fifidianana ry zareo goavana, Yahoo!  sy Google , izay mahatonga habetsahan'ny sarintany, lahatsary, raikipeo sy lahatsoratra. Betsaka ny haino aman-jery mahazatra ny namorona koa tranonkala manokana ho an'ireo karazany eo amin'ny aterineto, alefa eo amin'ny onjampeo sy fahitalavitra na koa atao printy. Ary eo ireo finday izay tsy afaka ialàna, izay mahazo simaiso na hafatra an-teny avy amin'ny vondrona politika samy hafa ny tompony.
Namoaka vaovao maromaro ny vaomiera indiana misahana ny fifidianana (Election Commission of India ) nanomboka amin'ny fisoratana anaran'ny mpifidy ka hatramin'ireo momba ny mpifanina izay naato tamin'ireo fifidianana ireo.
Vondrona politika arivo mahery
Raha avy amin'ny vaomiera indiana misahana ny fifidianana , vondrona pôlitika 1.000 mahery eo no mandray anjara amin'ny fifidianana ao an-toerana sy maneran'ny firenena raha jerena ny lisitra tsy mety tapitra an'ny vondrona pôlitika sy ny fango samy hafan'izy ireny. Nanao asa feno ny vaomieran'ny fifidianana ka nataony printy sy nozaraina maimaimpoana ireny endri-pamantarana hita maso ireny, izay afaka ampiasain'ny vondrona pôlitika, ary ao anatin'izay ny papango, ny vilany haingam-pahandro, ny paompy diesel ary ny famanàna rano mandeha herinaratra, sns…
Namoaka tahirinkevitra lavabe eo amin'ny 333 pejy misy ny lisitra kandidà 3423  naato ary tsy nahazo nandray anjara tamin'ireo fifidianana ny vaomieran'ny fifidianana. Ary angamba voalohany, tranonkala mitondra ny anarana No Criminals  (tsy mila mpanao heloka bevava) izay manana tanjona ny mba hampahafantatra ny mpifidy ny momba an'ireo kandidà voaheloka teny amin'ny fitsaràna famaizana, mba tsy hamelàna azy ireny handray anjara amin'ny fifidianana.
Araka ny lahatsoratra iray an-gazety , manana ny isa betsaka indrindra amin'ny mpanao pôlitika manankarena a amin'ny firenena ny Antokon'ny Kongresy.
Angano sy faminaniana
Misy angano maromaro niforona momba ireo mpifidy indianina nandritra ny taona maro. Miezaka ny hamaky an'ireo angano ireo i Yogendra Yadav, manam-pahaizana malaza amin'ny fifidianana, ao anatin’ity lahatsoratra ity , navoakan'ny BBC. Iray amin'ireo angano hiasan'i Yadav ny iray izay miteny fa betsaka amin'ireo vehivavy indianina ankehitriny no mampiasa ny zony mifidy, raha jerena ny vehivavy indianina rehetra. Ao anatin'izay ihany, midina ny isan'ireo vehivavy mangataka ny hevitry ny vadiny mba hahazoana ny heviny manokana amin'ny resaka fifidianana. Saingy ampiany hoe mirona manaraka ny vadiny foana ny vehivavy indiana rehefa hifidy ho an'ny vondrona pôlitika iray.
Raha momba ny fifidianan'ny tanora ao India indray, manohana i Yadav fa:
Tsy misy porofo izay afaka hieritreretana fa mavitrika kokoa eo amin'ny lafina pôlitika miohatra amin'ny hafa ny tanora. Mifanohitra amin'izany, tsy mavitrika loatra ara-pôlitika ny tanora – mazava ho azy fa manana olana hafa anatin'ny fiainana izy ireo, tahaky ny fanomanana ny hoavy arak'asa.
Ny angano iray tsy nokitihin'i Yadav dia ny anjara asan'ny fanandroana sy ny mpanandro, ary ny fiantraikany eo amin'ny pôlitisianina sy ny faminaniana izay ho valin'ny fifidianana. Efa manindry ny tatitra sasany fa araky ny mpanandro maromaro, hifarana aminà parlemanta tsy misy fandresena mazava azonà antoko ireo fifidianana ireo, izay midika hoe tsy misy maro an'isa mazava. Manontany tena aho raha tsy mifototra amin'ny fanadihadiana samihafa ireo mpanandro , izay maminavina fa tsy hisy mpandresy mazava ao anatin'ity fifidianana ity. Inona ny eritreritrareo?
Ampahany amin'ny Fandrakofana manokana ny fifidianana indiana tamin'ny 2009 nataon'ny Global Voices  ity lahatsoratra ity
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2018/08/16/124196/
 milina elektronika miisa 1 368 430 hifidianana: http://en.wikipedia.org/wiki/Indian_general_election,_2009
 Election Commission of India: http://kamlashow.com/blog/wp-admin/Election%20Commission%20of%20India%20is%20a%20permanent%20Constitutional%20Body.%20The%20Election%20Commission%20was%20established%20in%20accordance%20with%20the%20Constitution%20on%2025th%20January%201950.
 vaomiera indiana misahana ny fifidianana: http://eci.nic.in/ElectoralLaws/OrdersNotifications/symbols170309.pdf
 kandidà 3423: http://eci.nic.in/ElectoralLaws/FinalListofDisqualification.pdf
 No Criminals: http://www.nocriminals.org/about_us.php
 lahatsoratra iray an-gazety: http://nocriminals.files.wordpress.com/2009/02/scanned-clips-9.pdf
 ity lahatsoratra ity: http://news.bbc.co.uk/2/hi/south_asia/7973477.stm
 Fandrakofana manokana ny fifidianana indiana tamin'ny 2009 nataon'ny Global Voices: https://globalvoicesonline.org/specialcoverage/indian-elections-2009/